Ndị isi China abụọ na -agbanwe agbanwe isi ihe nrụpụta ngwakọta ngwa ngwa na ụlọ nrụpụta | Saselux
Ike oriri: 1.2W max.
Mmepụta: 3W MAX
① [Ndepụta ọkọlọtọ US] Mkpa ọkụ ihe mberede ọpụpụ mberede gafere asambodo UL. Ụlọ ABS thermoplastic na-akpụzi, ọkwa ire ọkụ UL-94V-0, na-eguzogide ọkụ. Ọ bụrụla ihe nchekwa ndụ mgbe ọkụ dara, ọkụ, ọnọdụ ihu igwe adịghị mma ma ọ bụ ọdachi ndị ọzọ. Bọtịnụ ule na ihe ngosi ụgwọ nwere nnwale siri ike.
② [Lifespan & Illumination] Ndụ nke ngwakọta akara mgbapụ a bụ awa 50000. Enwere ike chaja batrị maka nkwado ndabere na mpaghara ejiri akara ọpụpụ ihe mberede ugboro 300 wee rụọ ọrụ maka nkeji 27000 opekata mpe. Ịkwụ ụgwọ zuru oke nwere ike ịdịru karịa nkeji iri itoolu. Enwere ike ịgbanwuo isi ọkụ nke ngwaahịa a n'ụzọ ịchọrọ. Na isi ọ bụla nwere ọkụ SMD LED na -enwu enwu, nwere ike ịmị ọkụ 100 ụkwụ pụọ. Ọ dabara maka ọnọdụ mmiri mmiri n'ime ụlọ, mana ọ bụghị Wet.
[Wụnye ngwa ngwa] Enwere ike itinye ngwakọta a na mgbidi ma ọ bụ n'uko ụlọ. Anyị ga -akwado akwa akwa niile maka nrụnye.
④ [Ọdịmma dị elu] A na-eji ngwa nbipute ọkụ ọpụpụ nke ụlọ ABS thermoplastic akpụzi. Ọ gaghị eme agadi ka ọtụtụ afọ gachara. A ga -enyocha akụkụ niile nke ngwaahịa ahụ tupu mbupu. A nwalere bọtịnụ ule na ihe ngosi maka oge 2000.
Service [Ọrụ] Ọrụ OEM:
♥ Mbipụta akara na ngwaahịa a
Ngwa ahụ na -ahazi ụcha anụ ahụ
Printing Mbipụta igbe (mbukota)
Color Agba ọkụ ọkụ ahaziri iche
Ọrụ niile dị n'elu ga -ewepụta ọnụ ahịa ọzọ. Ọnụ ego ahụ ga -adịgasị iche dabere na ọnụ ahịa ịtụ na nha chọrọ. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ịtụ gị buru oke ibu, nke a ga -abụ n'efu.
Nke gara aga: UL Emergency LED Exit Lighting Combo
Osote: Motion sensọ N'uko Light Wall Light IP65
Rechargeable Ikanam Emergency Wepụ ịrịba ama